देउवालाई सासूको जागिरको पिर – Maitri News
देउवालाई सासूको जागिरको पिर
maitrinews July 22, 2018
काठमाण्डौं । डाक्टर गोबिन्द केसीलाई जुरुक्क बोकेर निर्वाचनको पराजयबाट तंग्रिन खोजिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्नो सासु प्रतिभा राणाको जागीर जोगाई दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले विज्ञप्ती जारी गरेर सभापति देउवाले डा. केसीको माग पूरा नगरे सडक र सदनबाट आन्दोलन चर्काउने चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताएपनि स्रोतका अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग थोरै समय मात्र कुराकानी गरेका थिए ।
देउवा प्रधानमन्त्री निवास पुग्दा प्रधानमन्त्री भारतीय कलाकारहरुसँगको छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । देउवा अचानक बालुवाटार पुगेको थाहा पाएर प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रमको बीचमै उहाँसँग भेट्नु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र देउवाका बीच डा. केसीका मागबारे सामान्य छलफल भएको र प्रधानमन्त्रीले डा. केसीलाई बोकेर राजनीति नगर्न र संसदलाई बन्धक नबनाउन देउवालाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनिरहँदा देउवा भने प्रतिक्रियाबिहिन देखिनुभएको थियो । यो कुरा छोडौं भन्दै देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई राजदूत फिर्ता गर्दा प्रतिभा राणालाई फिर्ता नगरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
राणा अहिले जापानका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ र उहाँ देउवाको सासु र देउवा पत्नी डा. आरजु राणाकी आमा हुनुहुन्छ । केहि दिन अघि प्रतिभा राणा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर आफुलाई नहटाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नु भएको बुझिएको छ ।
सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड बनाएर हालै मात्र भारत र मलेसियाका लागि राजदूत सिफारिश गरेको छ । सिफारिश भएका राजदुतहरु निलकण्ठ उप्रेती र उदयराज पाण्डेको संसदीय सुनुवाई हुन बाँकी छ ।
Previous Previous post: भारतीय महलीसागर बाँधका कारण नेपाली धानबाली डुबानमा
Next Next post: पुष्पलालको सपनाः सात दशकपछि पूरा